Indlela yokubukeka encinci iminyaka engama-10 ngaphandle kokuhlinzwa kwiplastiki: imithetho elula kodwa efanelekileyo
Isizukulwana samhlanje sibukeka sisincinane kunaphambili. Oogogo bethu kuphela kwafuneka babekezele ukuguga ngokwemveli, bengenalo i-arsenal yee-agent rejuvenating agents, ukuphumelela kweyeza zanamhlanje nezengqondo ezikhoyo kuthi. Abafazi banamhlanje babonakala behle kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima ukujonga ngokubonakala kwabo iminyaka yokupaspoti.
Ngokukodwa ndifuna ukugxeka ipasipoti yokuxoka, xa kucaca ukuba ulutsha "olugcinwe" alisoloko lubangelwa utyando oluthile lweplastiki. Imfihlelo yolutsha olungapheli luhlala kwizinto ezilula eziphantsi kwayo nayiphi na ibhinqa. Ukulula kwabo akuthethi ukungasebenzi. Ngokwahlukileyo, ukulandela iziphakamiso ezilula kunye nokuguqulwa kwazo zonke izenzo kwiinkqubo, kuya kuvumela ukuba udale "iipleyile zentombazana" yakho, eya kukulibazisa ukuguga ubuncinane iminyaka eyi-10.
Siyinto esiyidlayo. Umgangatho wezinto, into, into okanye izinto eziphilayo zixhomekeke kumgangatho wezinto ezivela kuyo. Kutheni thina, ukuzalisa umzimba wethu ngokutya okunzima, ukutya okukhawuleza okukhawuleza kunye nemikhiqizo ephantsi, silindele ukuba iya kuhlala iselula kwaye iphile? Kakade ke, iifowuni zokutshintshwa kwesondlo esifanelekileyo sele ziphelile, kwaye wonke umntu uyagula, kodwa le meko ayikwazi ukunyulwa. Ukutya okusemgangathweni kunye nokunamathela ekudleni - eziphambili "izitena" kwisiseko sempilo, kwaye ngokufanelekileyo, nolutsha. Ikhusela inkqubo yokuguga ngokufanelekileyo, apho indawo ephezulu inikwa imifuno kunye neziqhamo, ukutya okusanhlamvu, i-nut kunye nezinye ukutya ezizityebi kwiivithamini zobutsha-A, C, E. Njengezityalo zangasese zendalo, zenza umsebenzi oyintloko wokugcina umzimba ucocekile, zayo kwiinkxwaba. Kodwa nangona i-ration yemihla ngemihla iquletheke kuphela, inokutya, inokutya, kodwa inani leenkonzo liyakondliwa kubo bonke abantwana baseMpuma Afrika, oku akunakwenzayo ngokutya okufanelekileyo. Ukutya ngokugqithisileyo kuyinto efihliweyo kodwa eyingozi kakhulu yobutsha. Ukunciphisa izigaba kunye neekhalori kunokunyusa kakhulu ulutsha nobomi.
Ukuhambela amandla ngamandla omtsha. Ubomi kwintsebenzo esebenzayo lwandisa ulutsha, kwaye oku akukho iindaba kumntu. Kodwa, ngelishwa, sisoloko sikhoxisa iinyaniso ezicacileyo nezilula, sitsho inkqubela phambili kuyo yonke into, ukuhlala emsebenzini okanye ukungabi nako kwexesha. Ukugcina umsebenzi wokuzilolonga akudingi iincomeko ze-acrobatic complex, ixesha elininzi okanye imali. Kwanele ukugatya amaxesha amaninzi ngeveki ekuhambeni ngemoto, ukufaka endaweni yeenyawo okanye ukuhamba ngebhayisikili. Iiyure zokuhlala phambi kweTV okanye ikhomputha zingancinci, isebenzisa ixesha lokukhulula i-yoga kunye nokucamngca. Kwaye abasebenzi beeofisi baya kuba nako ukwenza i-gymnastics engaxakekiyo, bengakhange bavuke emsebenzini. Abasetyhini abakhangela abantwana banamahora angama-24 ngosuku, banabantwana, iintsapho, umsebenzi, ukukhathalela kunye neengxaki. Kodwa ukuhlala emzimbeni omncinci kunye nempilo kubo kuyishukumisayo esinamandla. Ngenxa yoko, ebomini babo, yonke into ixazululwa ngokuphambili kwezinto eziphambili. Kodwa nangona kungekho ndlela yokunciphisa enye imisebenzi ebalulekileyo kwithuba elincinane, kusekho indlela yokuphuma. Zesondo! Kulo lonwabe kukho amaxesha onke amathuba. Kunzima ukuza kunye nomzimba osebenzayo, ukuguqula ingqondo kunye nokuzivocavoca umzimba. Abo baza kunikwa imihla ngemihla kwiinyanga ezintandathu, banamathuba okujonga iminyaka engama-7 ukuya ku-7 kuncinci kwabo abangabandakanyekanga kwizesondo zontanga.
Ubomi ngaphandle koxinzelelo. Abaninzi baya kuthi ihlabathi lanamhlanje lizele ububi, ukucaphukisa kunye nokukhusekisa, ukuqhuba ukuxinezeleka. Ngoko ke, ukuba "yinqanawa", apho bonke abangenabuthi, baphonsa imfucuza ngesimo sengqondo esetyiweyo yecala kunye netyala, iimfuno kunye namabango, ukwesaba nokuxhalaba. Ukukhupha i-ballast, ukucaphukisa nokuguga, kunye nokugxininisa ngakumbi, kunokwenzeka kwaye kuyimfuneko. Kwabo banqwenela ukuba bahlale beselula kangangexesha elide kunokwenzeka, lixesha lokuphinda bacinge ngeengcinga zabo zangaphakathi ezibekwe ngumntu okhulisayo kunye noluntu, ezixhobileyo ngokuzikhukhumeza kunye nokushiya abadlayo abakhulu beendaba - beendaba, behlala bekhononda kunye nobunzima be-whiners kunye nabadali abangenasiphelo. Ukunyanzeliswa akuthinteli kwiimeko eziphathekayo, apho abantu abanesimo sengqondo esilungileyo kunye neenjongo zokudala bazenzela ububele babo.
Imibuzo ye-cosmetology yanamhlanje. Musa ukwesaba okanye ukuhoxisa impumelelo yesayensi yesimanje yobuhle nolutsha. Inkqubela ayikwenzi nje kuphela umsebenzi owonakalisayo, kodwa inezinto ezininzi ezinokukuvumela ukuba uphile ixesha elide, ngelixa uhlala uselula kwaye uhle. Kwakungekho malunga nokuhlinzwa okwenyuka kweplastiki, kodwa malunga neendlela ezinokuthengwa ngokukhawuleza. Emzabalazweni wobutsha, babonisa ngokugqithiseleyo ngempumelelo:
I-Laser i-peeling - iminyaka emininzi, ikhuphe ilusu leeseli ezigugile, i-pigmentation enebala kunye "neenkwenkwezi" ezisuka kwimikhumbi.
Izigulane ze-hyaluronic acid - "i-cocktail" ezisuka kumalungiselelo asebenzayo zizalisa imibimbi kwimibhobho yesikhumba sombuso.
Ukufakela isithombe - ukukhanya okukhanyayo kuphelisa iziphoso ebusweni bomzimba kunye nokwandisa ukuqina kwesikhumba.
Iibyox ze-Botox - zigqithise ngaphandle kwemicu enzulu kunye nemisebe ecaleni kwamehlo.
Ukukhathalela ukubonakala. Iminyaka embalwa ubudala kunye nezikhetho ezikhethiweyo kakuhle, kunye ne-wardrobe, ukwakheka kunye nekhwele, bayakwazi ukulahla iminyaka embalwa. Abasetyhini abazinyamekelayo, balandela imfashini kwaye banomdla kwiimveli kunye nempumelelo yoshishino lwefashoni, bahlale bekhangelelana kwaye banomtsalane ngakumbi kunokuba babo beontanga abaneminyaka engama-20 ubudala. Emva kokulumkileyo, uCoco Chanel waphawula ngokugqithiseleyo ukuba ibhinqa elineminyaka engama-20 ubudala libonakala livela kwindalo, kwiminyaka engama-30-leyo eyayizenza yona, kwaye yayineminyaka engama-40 ubudala-leyo yayifanele.
Ukususela kwiminyaka engama-20 ukuya kwimi-40, umfazi uninzi ixesha lokuthanda ukunyamekela kwakhe kwaye angenzi umlinganiselo wokunyanzeliswa, kodwa indlela yokuphila kunye nomkhwa obalulekileyo. Amaski okuphulukisa ekhaya ubuso, izandla kunye neenwele, ukuhlamba okuhlambulukileyo umzimba, ukuhamba kwi-beauty beautician, i-hairdresser, umenzi wezandla kunye nomenzi wamathandli kufuneka abe ngumsebenzi ongcwele kwaye onomdla kuwo wonke umfazi. Abaphathi bezoshishino zabo bayazi indlela yokususa iminyaka embalwa eyongezelelweyo ebusweni ngoncedo lwezonyongiso, kunye neenwele - ngoncedo lweentambo kunye neenwele zezinwele, ukusuka kumfanekiso - ngoncedo lweengubo. Kwaye kubaluleke kakhulu, khumbula ukuba umfazi uneminyaka emininzi njengoko evumela ukuba akhangele!
Ngokukhawuleza kwaye ugxothise isigxina
Ngoko ndihlambulula ukungapheleli kwesikhumba kunye nokwenza
Awukwazi ukufumana ubunzima emva kokulahlekelwa isisindo
Iimpazamo ezinkulu ezi-3 ekunakekelwa kwesikhumba: indlela yokuzilungisa
Iinkqubo ezithandwa kakhulu
Ukuzivocavoca izihlunu zesifuba ngexesha lokukhulelwa
Iipascards ezihle kakhulu kunye nemifanekiso kwiSonto lePlanga lika-2018 kunye nobuliso kunye nezifiso
Ukuthatha inxaxheba kwabazali kwimfundo yangaphambili yesikolo yabantwana
Ubunzima bokunciphisa: indlela yokulwa
Inyaniso yonke malunga ne-nanocosmetics
Abadlali bexesha elide kakhulu lethu
Ikhekhe lekhardi nge cherries
Ukukhusela ukukhulelwa kwangaphambili